Umhlanga Rocks rentals, at 5mi. from Umdloti Beach - KwaZulu Natal
Bed and Breakfast for rent near Umdloti Beach in a bungalow
Umhlanga rentals, at 6mi. from Umdloti Beach - KwaZulu Natal
La Lucia rentals, at 7mi. from Umdloti Beach - KwaZulu Natal
Ballito rentals, at 10mi. from Umdloti Beach - KwaZulu Natal
Shaka's Rock rentals, at 12mi. from Umdloti Beach - KwaZulu Natal
Morningside rentals, at 14mi. from Umdloti Beach - KwaZulu Natal
Durban rentals, at 16mi. from Umdloti Beach - KwaZulu Natal
1 bedroom Apartment-Flat for rent near Umdloti Beach for 2 people